Haleellaan Sudaan Itoophiyaa Irratti Geessiftu Jaabaatee Lafa Dabalataa To’atte. Oduu Ammee Waraanni Sudaan magaalaa #Salaambar jedhamu guutummaa guutuutti barbadeessuun qabate. Waraanni ammas ittuma fufee deemaa kan jiru yoo tahu, Korhumerii(Xefere Warq) fi Abderaafii qabachuuf yeroo [Read more]
QABAMUU FI AJJEEFAMUU HOGGANTOOTA ADDA BILISUMMAA UUMMATA TIGRAAY (ABUT) Berhanu Hundee | Guraandhala 07, 2021 Kutaa Sadaffaa Carraan ABUT kana booda maal ta’a? Gaafii kana yoon kaasu dhimma keenya dhimma ABOtu sammuu kiyya keessa dhufa. [Read more]
Press Release Advocacy for Justice for the Oromo People Tumsa Haqa Saba Oromo February 07, 2021 It is unfortunate that the Ethiopian government is aggressively detaining the Oromo People without trial and by ignoring the [Read more]
Qeerroon abidda Galaanni dhaamsuu hindandeenye! Qalbeessaa Dhangi’aa, Gurraandhala 7, 2021 Qeerroon of kennitoota sabaa waan qaban gadi hindhiifnedha! Qeerroon erga ijaarmaa aanjaa’aa tolfatee as, danqaa fi gidiraan itti hammaatu illee humna jabaa sagantaaf kaayoo baheef [Read more]
Icciitii Masaraa mootummaa keessaa baate!
Icciitii Masaraa mootummaa keessaa baate! Guraandhala 6, 2021 Walgahii dhoksaan mana maree nageenyaaa masaraatti kaleessaa jalqabee hanga ganama kanaa itti fufee ture. Mariin kun ajandaa lama irratti xiyyeeffate. 1. Mormii biyya Keessatti jalqabame kana akkamiin [Read more]